Ny fomba tsara indrindra ahafantarana ny maloto amin'ny botnet Araka ny Semalt
Ny maloto amin'ny botnet dia manana fahafahana handrefesana ny halaviran-toerana sy toerana samihafa. Midika izany fa ny tambazotran'ny zombies sy bots dia afaka mampandefitra mora foana ny rafitra maro manerantany. Ity fahafaha-manao ity dia mahatonga ny maloto botneta ho olana ara-tontolo iainana, ary ny ezaka atao amin'izany dia mila raisina haingana araka izay azo atao. Ny Frank Abagnale, Semalt Manager Success Manager, dia manazava fa ny malware botnet dia tamba-jahin'ny solosaina marary. Izy ireo dia tafiditra ary eo ambany fanaraha-maso feno spammer, hacker na mpanafika. Ireo fitaovana tsirairay izay anisan'ity tambajotra ity dia antsoina hoe bots.
Ny fanandramana amin'ny botnet malware sy ny fisorohana azy:
Tsy mora ny fahitana ny malware botnet satria izy ireo dia natao mba hiasana nefa tsy mamela na inona na inona momba ny fanatrehany. Na izany aza, misy fomba vitsivitsy hahitana sy hisorohana azy mora foana.
1. Ny varotra IRC
Ny loharanom-pifamoivoizana IRC dia ahitana botnets sy botmatters izay mampiasa IRC mba hifaneraserana
2. Fiovan'ny toetr'andro ambony amin'ny SMTP
Ny fitohanan'ny fifamoivoizana avo indrindra amin'ny SMTP dia tokony hatao araka izay azo atao.
3. Fitaovam-piadiana manohitra ny Botnet
Tsara ny fitaovana manohitra ny botnet ary manome antoka ny vokatra avo lenta. Ny varavarankely popup tsy ampoizina koa dia famantarana famantarana maloto amin'ny botnet.
4. Serasera tsy dia lavitra
Ny ordinatera miadana na ny fitaovana finday misy CPU na fampiasana fahatsiarovana dia ny famantarana ny malware botneta
5..Hipoka ny fifamoivoizana
Ny lozam-pifamoivoizana dia ahitana ny Port 6667 izay ampiasaintsika amin'ny IRC, Port 25 izay ampiasaintsika amin'ny mailaka mailaka, ary ny Port 1080 izay ampiasaintsika amin'ny server proxy
6. Ireo hafatra nivoaka
Ireo hafatra nivoaka ireo dia tsy nalefa avy amin'ny mpampiasa tena izy. Raha ny marina, dia nalefan'ny bots
7. Ny olana amin'ny fidirana aterineto sy ny haavony
Raha mahita olana maromaro mifandraika amin'ny fidirana amin'ny aterineto sy haingana ianao, dia ny fahombiazany dia ny fanafihan'ny botnet malware
Ny fanatontosana sy ny asan'ny tambajotranao dia tokony hijerena amin'ny fotoana tsy tapaka
Ny programa rehetra amin'ny ordinateranao na ny fitaovana findainao dia tokony havaozina indrindra indrindra ny programa fiarovana anao sy ny programa fanoherana malware
Ny mpampiasa dia tokony hiaro ny fitaovany amin'ny botsa-pifamoivoizana amin'ny alalan'ny fametrahana rindrambaiko sy programa manan-danja
Ny fananganana maloto amin'ny botnet amin'ny aterineto:
Ny bot dia miforona rehefa voan'ny virosy na ny malware ny solosaina na ny fitaovana finday. Izany dia ahafahan'ireo hackers mifehy io fitaovana io ary tsy mahafantatra na inona na inona momba izany ianao. Ny hackers na ireo mpanafika izay mifehy ny botnets dia antsoina hoe mpiandry bot na botmasters. Ny mpanohitra na ny hackers dia mampiasa botnets noho ny antony samihafa; Ny ankamaroan'izy ireo dia mampiasa bots sy virus ho an'ny cyber-kolikoly. Ny fampiharana botnet matetika dia ny fanafihana an-tserasera, fanentanana mailaka amin'ny spam, data ny halatra, ary adware na spyware.
Ahoana no hanombohan'ny fanafihana amin'ny botnet avy amin'ny botnet?
Ny fanafihana botnet dia manomboka amin'ny fandraisana mpiasa. Ny botmatters dia mametraka ny botsika hanaparitaka kankana, viriosy ary malware. Izy io koa dia ampiasaina hanakanana sy hampiditra maro ny ordinatera izay mety na mety tsy ahitana ny programa antivirus. Ny viriosy botnet dia mifandray amin'ny fitaovana ampiasainao ary mifehy ny servers. Avy any, afaka mifandray sy mifehy ny bots ireo mpanafika, ka manome azy ireo andraikitra manokana. Rehefa nahatratra ny halehibia notakiana ny botnets dia afaka manararaotra ny botnets ny mpikaroka amin'ny fanatanterahana fanafihana sasany, toy ny servera tafahoatra, mangalatra ny fampahalalana manokana, misiônera ary mandefa mailaka Source .